Warshadda Birta ee loo yaqaan 'Iron Iron Preseasoned Fry Pan Factory' - Shiinaha Shiinaha Ayaa Bilaashka Sameeya Fry Pan Soo Saarayaasha, Shirkadaha
Faahfaahinta alaabada: JT 4002A Waxyaabaha: Cabbirka birta xaddiga: 22 * ​​2.9 xirxiran: sanduuqa hadiyadda ama sanduuqa bunni sharraxaadda badeecada: dusha sare ee jilicsan iyo tayada dusha sare ee isku mid ah ee alaabada oo dhan maxaa yeelay jirka dillaaca waxaa sameeya xarigga naqshadda gawaarida ee DISA.
Faahfaahinta alaabada: JT 6250, JT7251 Waxyaabaha: Cabbirka birta xaddiga: 16 * 3.8, 18 * 4.3 Khariidad: sanduuqa hadiyadda ama sanduuqa bunni sharraxaadda sheyga: Dusha sare ee jilicsan iyo tayada dusha sare oo isku mid ah dhammaan alaabada maxaa yeelay jirka kicinta waxaa sameeya DISA auto. xargaha qafiska.
Faahfaahinta alaabada: JT 60W, JT 63 W Waxyaabaha: Cabbirka birta xaddiga: 22.8 * 2, 24.5 * 1.8 xirid: sanduuqa hadiyadda ama sanduuqa bunni sharaxaadda badeecada: Dusha sare ee jilicsan iyo tayada dusha sare oo isku mid ah dhammaan alaabada maxaa yeelay jirka qalcadda waxaa sameeya Khad khadka qaabeynta ah ee DISA.
Faahfaahinta alaabada: JT 70, JT 72, JT 71 Shayga: Cabbirka birta xaddiga: 16.5 * 4.2, 20.5 * 4, 25 * 4.6 Xirmooyin: sanduuqa hadiyadda ama sanduuqa bunni sharraxaadda alaabada: Dusha sare ee siman iyo tayada dusha sare oo isku mid ah dhammaan alaabada maxaa yeelay jirka kicinta waxaa lagu sameeyaa khadka toosan ee DISA.
Faahfaahinta alaabada: JT 140, JT 190 Maadooyinka: Birta kafeega hore Loogu talagaley Cabbirka: 15 * 2.9, 19.5 * 4.5 Khariidad: sanduuq hadiyad ama bokis bunni sharraxa alaabada: Dusha sare ee jilicsan iyo tayada dusha sare oo isku mid ah dhammaan alaabada maxaa yeelay jirka kicinta waxaa sameeya Khad khadka qaabeynta ah ee DISA.
Faahfaahinta alaabada: JT 87A Waxyaabaha: Birta kafeega hore Cabbirka: 23 * 3.3 Xirmooyinka: Sanduuqa hadiyadda ama santuuqa bunni sharraxaadda sheyga: Dusha sare ee jilicsan iyo tayada dusha sare ee isku midka ah ee alaabada oo dhan maxaa yeelay jirka kicinta waxaa sameeya xariijinta naqshadda gawaarida ee DISA.
Faahfaahinta alaabada: JT 01, JT 01W Waxyaabaha: Birta loo saadaaliyay ka hortag Cabbir: 21 * 15 * 1.8, 25 * 18.5 * 1.8 Xirmid: sanduuq hadiyad ama bokis bunni sharraxa alaabada: Dusha sare oo quruxsan iyo tayo dusha sare oo isku mid ah dhammaan alaabada maxaa yeelay kabka. Jirka waxaa sameeya khadka toosan ee DISA.
sheyga magaca sheyga bir laba jibbaaran skillet dhigay dhexroor 26x26cm dherer ah 5cm, daahan preseasoned xirxiran sanduuq bunni ama sanduuqa midabka astaanta astaanta gaarka ah Astaamaha kuleylka habeysan ee ku habboon kuleylka ku habboon dhammaan karinta karinta iyo u adeegsiga qeybaha khudaarta shaqsiyadeed, dhinacyada, iyo macmacaanka Waxay bixisaa haynta kuleylka aan habeyn iyo xitaa kuleylinta; daboollada kuxiran dhadhanka halka gacanta ay u oggolaaneyso raridda fudud FDA la ansixiyay ee horay loo diyaariyey oo bir ah ayaa u oggolaaneysa in si dhakhso leh loo isticmaalo Ma noqon kartaa ...